श्रीमानले २ लाख ५० हजार भारुमा आफ्नै श्रीमती र छोरा बेचे, कोठीवाट भागेर नेपाल आएकी चेलीको रुँदै (हेर्नुहोस् भिडियो हेर्नुस्). - Babal Khabar
श्रीमानले २ लाख ५० हजार भारुमा आफ्नै श्रीमती र छोरा बेचे, कोठीवाट भागेर नेपाल आएकी चेलीको रुँदै (हेर्नुहोस् भिडियो हेर्नुस्).
January 4, 2021 by बबाल खबर
काठमाडौ । आफ्नै श्रीमानले भारतमा लगेर बेचेको घ’टना सार्वजनिक भएको छ । श्रीमानसंग भारत गएकी उनलाई श्रीमानले नै बेचेर आए पछि उनी भागेर नेपाल आइपुगिन् । श्रीमानले भारतमा अरु पुरु षसंग सम्ब’न्ध राख्न समेत लगाएको महिलाले बताएकी छन् । धनगढीकी महिला अहिले भागेर नेपाल आएपछि घट’नावारे जानकारी गराएकी छन् । छोरासंगै भारत गएकी महिललाई छोरासंगै बेचेको महिलाले बताएकी छन् । आफु बेचिएको उनले सोही दिन थाहा पाएको बताएकी छन । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
विवाह गरेर घरमा गएपछि उनलाई घरमा पनि परिवारका सदस्यले निकै दुख दिने गरेका थिए । परिवारमा निकै ‘दु’ख सहेकी उनलाई श्रीमानले भारतमा लिएर गएका थिए । भारतमा गएपछि उनलाई श्रीमानले रातीमा काममा जान पठाए । जसको घरमा काम गर्न गइन् उनले तँलाई तेरो श्रीमानले बेचेर नेपाल फर्किसक्यो भनेर सुनाएपछि थाहा पाएको बताइन् । अहिले उनी अस्वा’स्थ्य छन् । मुटुको विरा’मी उनी उप’चार गराउन चाहन्छिन् । तर नेपाल आएपछि उनले आफुलाई न्याय दिन कसैले सहयोग नगरेको बताइन् ।
नेपालमा भएको घर र सम्पत्ती सबै बेचेर उनले अब म तँलाई सुख दिन्छु भारत लगेर बसौं भनेर छोरा सहित उनी श्रीमानको साथ लागेर गइन् । उनले विश्वा’स गरेर भारत गएपछि, यसरी बेच्छ होला भनेर शं का पनि लागेन । उनी भारतमा पुगेपछि सुरुमा निकै माया गरेको देखाए । तर पछि तिमी रातमा अर्कैको घरमा जाउ भनेर काम गर्न जाँदा त्यो पुरुषले अब तँ मेरो श्रीमती भएर बस्नुपर्छ । तेरो श्रीमानले तँलाई साढे २ लाखमा बेचेको हो भनेर सुनाएपछि आफु त्यहाँवाट भागेको बताइन् । उसको बच्चा स्कूलवाट लिएर आउँछु भन्ने वहाना बनाएर उनी घरवाट निस्केर छोरा लिएर भागेको बताइन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
Prev९ बर्षिय सचिन परियारले तोडे सबै रेकर्ड, लोक गीतको इतिहासमै २४ घण्टा नबित्दै ट्रेन्डिङमा
nextविवाह पछि परेको पतिको पहिलो जन्म दिनमा स्वेताले दिइन् यस्तो सरप्राइज